Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan "xxx.mdf Ma aha Faylka Xogta Aasaasiga ah" Khalad
Bogga ugu weyn Products DataNumen SQL Recovery xxx.mdf Ma aha Faylka Xogta Aasaasiga ah
Waa lagu guuldareystay in dib loo helo xogta codsigan. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc)
xxx.mdf ma aha faylka keydka aasaasiga ah. (Microsoft SQL Server, Khalad: 5171)
halka 'xxx.mdf uu yahay magaca faylka MDF ee lagu lifaaqayo.
Xogta ku jirta faylka MDF waxaa lagu keydiyaa sida bogag, bog walbana waa 8KB. Bogga koowaad waxaa loo yaqaan bogga faylka cinwaanka bogga, kaasoo ay ku jiraan most macluumaad muhiim ah oo ku saabsan feylka oo dhan, sida saxiixa faylka, cabirka faylka, iswaafajinta, iwm Bogagga haray waxay sidoo kale ku jiraan macluumaadka muhiimka ah, oo ay ku jiraan macluumaadka u qoondaynta bogga iyo sidoo kale xogta dhabta ah.
Haddii faylka MDF faylka cinwaanka bogga, ama bogagga kale ee maareynta muhiimka ah ay waxyeelloobeen ama kharribeen, oo aan Microsoft aqoonsan karin SQL Server, ka dibna SQL Server waxay u maleyneysaa in feylka oo dhan uusan aheyn feylasha aasaasiga ee aasaasiga ah isla markaana soo sheega qaladkan.
SQL Server 2005 Khalad1_1.mdf Khalad1_1_fixed.mdf
SQL Server 2008 R2 Khalad1_2.mdf Khalad1_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 Khalad1_3.mdf Khalad1_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 Khalad1_4.mdf Khalad1_4_fixed.mdf